दाङ पश्चिम नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्र बन्छ – Janaubhar
दाङ पश्चिम नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्र बन्छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ १४, २०७४ | 487 Views ||
अध्यक्ष, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण भुसालले आफ्नो कार्यकाल शुरु हुनेबित्तिकै व्यवसायीको पक्षमा केही सुधारका काम शुरु गरेका छन् । दाङलाई पश्चिम नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्रविन्दु बनाउन निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफूले पहल गर्ने उनी बताउँछन् । दाङ उवासंघको योजना, व्यवसायीका समस्या, दाङमा लगानीको सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नौलो जनउभार साप्ताहिकका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । तपाईसँग के छन् योजना ?
म सबैभन्दा पहिले हामीलाई विश्वास गरेर मतदान गर्नुहुने आम मतदाताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । यहाँहरुको सहयोग र समर्थनले हामी अघि बढ्नेछौं ।
हामीले निर्वाचित भए लगत्तै घोराही क्षेत्रमा देखिएको घुमन्ते व्यवसाय नियन्त्रण गर्ने पहल शुरु गरिसकेका छौं । अवैधानिक रुपमा चलिरहेको घुमन्ते व्यवसाय हामीले बन्द गर्नेछौं । यसका लागि उपाध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छौं ।
त्यसैगरी व्यवसायीहरुलाई दर्ता, नवीकरण गर्न सहज होस् भनेर भदौ २३, २४ र २५ गते उद्योग वाणिज्य संघको परिसरबाटै प्यान उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं ।
घोराहीलाई सफा र सुन्दर शहर बनाउन उवासंघको तर्फबाट पहल गरिनेछ । जिल्लामा बाह्य लगानी बढाउन लगानीमैत्री वातावरणका लागि पहल गर्ने छौं । व्यवसायीहरुको भौतिक सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग उचित समन्वय गर्ने छौं । व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग उचित पहल गरिने छ ।
केही समय भित्र विभिन्न भञ्सार कार्यालयहरुमा पुगेर त्यहाँबाट हुन सक्ने अवैध सामान ओसारपसार रोक्न पहल गर्ने छौं । बजार व्यवस्थापनका लागि घोराही उपमहानगरपालिकासँग उचित समन्वय गरिने छ । फुटपाट रोकेर एकीकृत बजार व्यवस्थापन गरिने छ । हप्ताको एक दिन हाट बजार लगाइने छ ।
पुराना ठूला योजनाहरु पूरा गर्न के गर्नुहुन्छ ?
म विगतका कार्यसमितिहरुमा विभिन्न पदमा काम गर्दै आएको छु । विगतका कार्यसमितिले अघि बढाएका योजनाहरुको वारेमा म राम्रोसँग विज्ञ छु । ती योजनाहरुलाई हामीले निरन्तरता दिने छौं ।
सभागृह निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहनेछ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो योजना हो । जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र बनेको खण्डमा लगानीको वातावरण तयार हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउन सक्छन् । हामीले राजश्वसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउने छौं । त्यसैगरी लेखा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसायीहरुलाई सचेत बनाइने छ ।
तपाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनुभएको छ । निर्वाचनमा पराजित पक्षलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वभाविक प्रक्रिया हो । निर्वाचन भइसकेपछि हार जित पनि स्वभाविक प्रक्रिया हो । अर्को कुरा, हामी निर्वाचनको दिनसम्म फरक–फरक प्यानलमा थियौं । विजय भइसकेपछि हामी एउटै प्यानल हो । हामी अहिले साझा भइसकेका छौं । यहाँको व्यावसायिक क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ । हामी सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्छौं ।
अर्को कुरा यसपटक विगतमा जस्तै निर्वाचनमा राजनीतिक हस्तक्षप पनि भएन । विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले नै कुनै प्यानलको पक्ष र विपक्षमा विज्ञप्ती निकाल्ने गर्दथे । तर, यसपटक त्यो हदसम्म पुगेन । व्यवसायीहरुले सक्षम साथीहरुलाई नेतृत्वमा पु¥याएका छन् । हामी सबै एक भएर काम गर्ने छौं ।
दाङका व्यवसायीहरुको समस्या के छन् ?
कुनै पनि क्षेत्र समस्या मुक्त हुन सक्दैन । व्यवसायीहरुबीच थुप्रै समस्या छन् । ती समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्ने छ । मुलुकभरका व्यवसायीहरुका साझा समस्या नै हाम्रो समस्या हो । त्यस्तै, दाङमा केही विशिष्ट प्रकारका समस्याहरु छन् । घरभाडा सम्बन्धी विवाद यहाँको प्रमुख समस्या हो । व्यवसायी र घरधनीबीच उचित समन्वय नहुँदा समस्या भइरहेको छ । निश्चित भाडादर बनाइनुपर्छ ।
लो भोल्टेज पनि दाङका व्यवसायीहरुको प्रमुख समस्या हो । दाङमा अहिले पनि उद्यमीभन्दा व्यापारीहरु धेरै हुनुहुन्छ । यहाँका व्यवसायीहरुलाई उद्यमी बनाउन सरकारले विशेष योजना ल्याउन जरुरी छ ।
राजश्वसम्बन्धी व्यवसायीहरुलाई जानकारी छैन । सरकारले पनि राजश्व विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । राजश्वको सिलिङ विवाद पनि एउटा प्रमुख समस्या हो । अहिले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेको महङ्गीलाई हेर्दा यो अलि मिलेको छैन । वर्षौं अघिको नीति अहिले कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ । अब १ करोडभन्दा कमको कारोबारलाई प्यानमा र सो भन्दा बढीको कारोबारलाई भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
तपाईहरु विगतदेखि नै दाङमा लगानीको वातावरण तयार भइरहेको छ भन्नुहुन्छ । दाङमा लगानीका क्षेत्रहरु के के हुन् ?
दाङ भौगोलिक र हावापानीका दृष्टिकोणले लगानीका लागि निकै उपर्युक्त जिल्ला हो । दाङ औद्योगिक तथा कृषि लगानीका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । दाङमा कृषि उद्योग नै लगानीको प्रमुख क्षेत्र हो । प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन भएकाले दाङ कृषि उत्पादन राम्रो गर्न सकिन्छ । माछापालन, पशुपालन, बाख्रा, बंगुर तथा गाइपालन गर्न सकिन्छ । यहाँ साना तथा ठूला जडिबुटी उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
दाङ पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । यहाँका तालतलैया, मन्दिर, गुफा तथा वनजंगल पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छन् । साथै छिमेकी जिल्ला प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी जानको लागि दाङ भएरै जानुपर्दछ । यसको फाइदा दाङको होटल व्यवसायले लिन सक्छ । दाङमा होटल व्यवसायको सम्भावना पनि राम्रो छ । दाङमा पछिल्लो समय ठूला लगानीका होटलहरु खुल्न थालेका छन् । अझैं दर्जनौं ठूला होटलहरु खुल्न सक्छन् । समथर भूभाग र राम्रो हावापानी भएकाले दाङमा ठूला प्रकृतिका उद्योगहरु पनि स्थापना गर्न सकिन्छ ।
पूर्वी नेपालको तुलनामा पश्चिम नेपालमा उद्योगधन्दाहरु धेरै खुल्न सकेका छैनन् । तर, पश्चिम नेपालमा बजारको सम्भावना राम्रो छ । दाङ पश्चिम नेपालकै केन्द्रविन्दु भएकाले सबैखाले उद्योग धन्दा खोल्न सकिन्छ ।
अहिले ठूला लगानीकर्ताहरु दाङमा आइरहेका छन् । लगानीकर्ताहरुको रोजाइ दाङ किन भएको होला ?
मैले यस अघि नै प्रष्ट पारिसकेको छु । दाङ पश्चिम नेपालको लगानीको प्रमुख क्षेत्र हो । यहाँ लगानीका धेरै सम्भावनाहरु पनि छन् । यहाँको भौगोलिक अवस्था र हावापानी नै लगानीको प्रमुख आधार हो । दाङ दक्षिण एशियाकै ठूलो उपत्यका हो । यहाँको हावापानी निकै राम्रो छ । कच्चा पदार्थहरु पनि पर्याप्त मात्रामा छ । सिमेन्ट उद्योगको लागि चुनढुंगा, कोइलाको खानी प्रशस्तै छ । दाङ भारतीय सिमासँग पनि जोडिएको छ । उद्योगधन्दाको बजारीकरणका लागि दाङमा कुनै समस्या छैन ।
दाङको आर्थिक तथा समग्र विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
तराई तथा भित्री मधेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा दाङ विकासमा अलि पछि परेको छ । अब यहाँको विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । यहाँको समग्र आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणबिना मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले सडक सञ्जाल निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
हुन त पछिल्लो समय दाङमा सडक सञ्जाल निर्माण भइरहेका छन् । सहिदमार्गलाई पूर्णता दिनुपर्छ । दाङ–सुर्खेत सडक, लमही–कोइलाबास सडक, घोराही–मुर्कुटी–प्यूठानलगायतका ठूला सडक परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरिनुपर्छ । यसले गर्दा दाङलाई छिमेकी मुलुक भारत र पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुसँग प्रत्यक्ष जोड्छ । यहाँको उत्पादनलाई ती ठाउँमा लैजान र त्यहाँ उत्पादित अत्यावश्यकीय वस्तुलाई यहाँ ल्याउन सजिलो पर्नेछ ।
तुलसीपुर विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न सकियो भने पनि यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा निकै सहयोग पुग्नेछ । साथै हवाइसेवा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा दाङमा विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरु पनि खुलिरहेका छन् । धाराको टुटी उद्योग, बिस्कुट उद्योग, ग्यास प्लान्टलगायतका उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका थुप्रै उद्योगहरु खुल्न सक्छन् ।
र, अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
म अन्त्यमा हामीलाई मतदान गर्नुहुने सबै मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसैगरी मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा नौलो जनउभार परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
Posted in कुराकानी
Prevमाओवादी केन्द्र र चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलबीच भेट वार्ता
Nextबालविकासमा प्रोजेक्टरका माध्यामबाट पढाइ